We She Me: SQL Injection
Computer Program တွေ စရေးတုန်းက Senior Programmer တွေက ကိုယ်ရေးထားတဲ့ Program ကို Test လုပ်ရင် (ဥပမာ) Employer Name ဆိုတဲ့ Field ထဲမှာ Value ထည့်တဲ့ အခါ John လို့ မထည့်ဘဲ John's လို့ ထည့်လိုက်ရင် Program က Error တက်သွားပါရော။ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ SQL Statement ကို ရလာတဲ့ Value နဲ့ Construct လုပ်ထားမိလို့ပါ။ Source code က ဒီလိုမျိုး
sql = "select * from emp where name = ' " + m_Name + " '"
အဲဒီ SQL ထဲကို John's ထည့်လိုက်ရင် sql ရဲ့ Value က ဒီလို ဖြစ်သွားပါတယ်။
select * from emp where name = 'John's'
အဲဒီတော့ SQL က Valid မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုး မဖြစ်အောက် ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ ဆိုတော့ SQL Parameter တွေကို Bind လုပ်ယူရပါတယ်။
sql = "select * from emp where name = ?"
အဲဒီလိုမျိုးမှ ဘယ်လို value လာလာ Text (String) value ဖြစ်သွားပြီး မှန်တဲ့ SQL Statement ကို ရပါတယ်။
ဒီအလေ့အကျင့်ဟာ အခု အသုံးဝင်လာပါတယ်။ ကုမ္ပဏီက System တွေကို အစိုးရရုံးတွေကို ရောင်းတဲ့ အခါ Security နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်ဆေးပါတယ်။ ဥပမာ Credit Card နံပါတ်တွေကို သေသေချာချာ သိမ်းလား၊ Network Security ဘာညာတွေပါ။ စစ်တဲ့ အထဲမှာ ပါလာတာ SQL Injection အတွက်ရော ကာကွယ်ထားသလားတွေပါ။ SQL Injection ဆိုတာ အထက်က ပြောသလိုပဲ Application မှာ String Value ထည့်ရမယ့် နေရာတွေမှာ SQL escape character တွေသုံးပြီး Application ကို မရည်ရွယ်ထားတဲ့ အတိုင်း ပြုမူ လုပ်ဆောင်စေတာပါ။ စနစ်တကျ Develop မလုပ်ထားတဲ့ စနစ်တွေဟာ ဒီနည်းအတိုင်း ဖောက်ထွင်း ၀င်ရောက် ခံရနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ Login Page မှာ User Name မှန် မမှန်ကို ဒီလို Count က Zero မဟုတ်ရုံနဲ့ မှန်တယ် စစ်ထားတယ် ဆိုပါတော့
SELECT count(*) FROM users WHERE name=’FIELD_USERNAME’
အဲဒီလိုမျိုးဆိုရင် FIELD_USERNAME ရဲ့ တန်ဖိုးကို John' or 'x' ='x လို့ပေးလိုက်ရင် SQL Statement က ဒီလိုမျိုး ရပါမယ်။
SELECT count(*) FROM users WHERE name=’John' or 'x'='x'
အဲဒီတော့ ဒီ SQL မှာ WHERE Part က TRUE ဖြစ်တဲ့ အတွက် FIELD_USERNAME အတွက် ဘယ်လို တန်ဖိုးလာလာ အမြဲတမ်း Run နေတော့မှာပါ။ တကယ်လို့ name ရော password ရော စစ်ထားတဲ့
SELECT count(*) FROM users WHERE name=’FIELD_USERNAME’ and password ='FIELD_PASSWORD'
လိုမျိုးအတွက်ဆိုရင် FIELD_USERNAME အတွက် John' or 'x' ='x -- (ဒီနေရာမှာ -- က Comment ပိတ်တယ်လို့ ယူဆမည်)
SELECT count(*) FROM users WHERE name=’John' or 'x'='x' -- and password ='FIELD_PASSWORD'
SQL Statement မှာ and ရှေ့က စပြီး Comment ပိတ်လိုက်တဲ့ အတွက် password ကို မှန်မမှန် စစ်စရာ မလိုတော့ ပါဘူး။ ဒီလိုနည်း သုံးလိုက်ရင် Table တွေ Drop လုပ်ချင်လည်း ရလာပါတယ်။ ဥပမာ John'; DROP TABLE users; -- ဆိုရင်
SELECT count(*) FROM users WHERE name= 'John'; DROP TABLE users; -- and password ='FIELD_PASSWORD'
SQL Statement နှစ်ကြောင်း ဖြစ်သွားပြီး တစ်ကြောင်းက SELECT ဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ တစ်ကြောင်း DROP Statement ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒီလို လုပ်လို့ ရတာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ Google မှာ ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီလို SQL Injection တွေကို ကာကွယ်ဖို့ နည်းလမ်းကတော့ Parameter တွေကို Bind လုပ်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ Prepared Statement တွေ သုံးပြီး ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ
PreparedStatement ps = con.prepareStatement("SELECT count(*) FROM users WHERE name=? and password =?");
သဉ္ဇာ - Thinzar - 5/12/08, 6:26 PM
thanks4this post =)
Anonymous - 9/18/08, 11:30 PM
ဒင်းကြောင့် ကျနော်တို့ဆို table ကို ထိတောင်မထိဘူး။
view, sp တို့နဲ့ပဲ သွားတယ်။